New Issues 2020: Myanmar (Independence) – Philatelic Pursuits
New Issues 2020: Myanmar (Independence)
Posted on 2020-01-08 2020-01-10 by Mark Joseph Jochim
Independence 72nd Anniversary
Myanmar: Independence 72nd Anniversary,4January 2020. Images from Commonwealth Stamps Opinion.
Myanmar: Independence 72nd Anniversary (first day cover),4January 2020. Image from Myanmar Stamp Club Facebook Page.
4.1.2020 လွတ်လပ်ရေး နေ့ ၂၀၀ ကျပ်တန် ၃မျိုးထွက်မယ်နော်
(၇၂)နှစ်မြောက်၊ လွပ်လပ်ရေးနေ့ အထူးထုတ်စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချပေးမည်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ (၇၂)နှစ်မြောက်၊ လွပ်လပ်ရေးနေ့ ၂၀၀/-ကျပ်တန်အထူးထုတ်စာပို့ တံဆိပ်ခေါင်းသစ် (၃)မျိုးအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၄)ရက်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း (၁၀)ရက် (စနေနေ့) နံနက် (၀၉:၃၀)နာရီမှ စတင်၍ နေပြည်တော် ဗဟိုစာတိုက်ကြီး၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး၊ မန္တလေးစာတိုက်ကြီးတို့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များရှိ မြို့တော်စာတိုက်ကြီးများတွင် ရောင်းချပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် နေပြည်တော်ဗဟိုစာတိုက်ကြီး၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးနှင့် မန္တလေးစာတိုက်ကြီးတို့၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ (၄)ရက်၊ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း (၁၀) ရက်နေ့၌ ဝယ်ယူသော စာပို့တံဆိပ်ခေါင်း များနှင့် ပ ထမနေ့စာအိတ် ( Firstday Cover )များပေါ်တွင် နေ့စွဲအမှတ်အသားတံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Brand head collectors
4.1.2020 freedom day 200 kyats for3FREE.
72th annual freedom day special post brand head sale
Ministry of shipping and communication, Myanmar post office (72) years of freedom day 200 /- kyats special post brand new headlines (3) in Myanmar New York on January 4, 1381 Starting Saturday from 09:30 am to 09:30 am at the national central post office, Yangon post office, Mandalay post office, Mandalay.
A special event will be printed on firstday cover on firstday cover, Yangon post office and Mandalay post office on 10th January 2020, 1381
၇၂နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်ပါတယ်။ ၂၀၀ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်း ၃မျိုးထုတ်ဝေပါတယ်။ တံဆိပ်ခေါင်းပေါ်က ပုံတွေနဲ့ FDC လည်း ထုတ်ပါတယ်။ ၂၀၀ကျပ်တန်ပါဘဲ။
ဒီခေတ်မှာ တံဆိပ်ခေါင်းစုသူ ရှားလာပါပြီ။ ခုခေတ်လူငယ်တွေက စာထည့်တာ၊ တံဆိပ်ခေါင်းအသုံးပြုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ သူတို့စိတ်ဝင်စားလာအောင် ပုံကောင်းကောင်းလှလှလေးတွေနဲ့ ထုတ်ဝေသင့်ပါပြီ။
၁၉၈၈နောက်ပိုင်း အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ထုတ် တံဆိပ်ခေါင်းတွေဟာ ပိုစတာပုံကြီးတွေပါဘဲ။ ပိုစတာတွေက ဆိုဒ်ကြီးတော့ ပုံတွေမြင်ရနိုင်ပေမယ့် တလက်မပတ်လည် စာရွက်ကလေးပေါ်မှာတော့ ဘာတွေမှန်းကို မသိသာတော့ပါဘူး။ လူစိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒီအချိန်က ဝါဒဖြန့်ချီရေး လုပ်နေရမယ့် အချိန်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီအချက်ကို ပေါ်လွင်အောင်လို့ ခါတိုင်းလို MYANMAR POST ကထုတ်တဲ့ FDC ပုံ မဖော်ပြတော့ဘဲ Myanmar Philatelic Society (မြန်မာ စာပို့ဝါသနာရှင်များအသင်း)က ထုတ်တဲ့ FDC ဘဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
72th independence day brand head
Celebrating 72th independence day. 200 K3brand heads published. FDC with pictures on branded head. Worth 200 kyats.
These days, branded heads are rare. Young people nowadays don’t add or use brand head. They should be publishing with beautiful pictures to make them interested.
After 1988 especially independence day brands are posters. Posters can be seen in big size, but you don’t know what’s on the paper around. Low human interest in human interest. This is not the time of propaganda.
The FDC has been published on Myanmar Philatelic Society (Myanmar postal hobbies team) has been published on this point.
Posted in New IssuesTagged 2020 stamps, Burma, Myanmar, New Issues
← New Issues 2020: Great Britain (Video Games)
New Issues 2020: French Southern and Antarctic Lands (St. Paul’s Lobsters) →
1 thought on “New Issues 2020: Myanmar (Independence)”